Nkata & Ozi. Njirimara Izi ozi ederede dị mfe, na-enye aka
IHE: must ga-nbanye ikori & ozi! Ederede na Nkata gị na onye ọ bụla si na ngwaọrụ gị. Nkwurịta okwu mades mfe. Ikori dị mfe na Sugarlove1 App….
Ọdịnaya a bụ maka (VIP) Sugar Baby, (VIP) Sugar Mama, (VIP) Sugar Daddy, and (VIP) Online Dater members only.
Banye ➤ Buru onye VIP
Nwere ike ịchọpụtakwu ụdị kuki anyị na-eji ma ọ bụ gbanyụọ ya n'ime ntọala.